Blog – deepesh.com
साना साना बच्चाहरुको राम्रो फोटो कसरि खिच्ने? खिच्दा खेरि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु, खिच्दा चाहिने सामनहरु र खिची सके पछि कसरि एडिट गर्ने ? यी सम्पूर्ण कुरा हरु आजको इपिसोडमा फोटोग्राफर किर्तन ताम्राकारले सिकाउदै छन्। (www.nirvanaimagery.com.au)
सानै देखि चित्रकलामा निपुण किर्तन ताम्राकारले ढिलो क्यामेरा समाए पनि उनको फोटोहरु देख्दा लाग्छ कि उनले एउटा हातमा चित्र बनाउने पेन्सिल र अर्को हातमा क्यामेरा खेलाउदै हुर्के। उनले क्यामेराले प्रकाशको सहायताले कोर्ने फोटोग्राफहरु मनै लोभ्याउने हुन्छन। उनको चित्रकला अनि फोटोग्राफीको अन्तरसम्बन्ध, उनको फोटोग्राफी गियर हरु र यहाँ सम्म पुग्न गरेको यात्रा को बारेमा कुराकानी
वाल्किरा स्काउट X4 क्वाडकप्टर को बट्टा भित्र के के छ त ?
Pokharacity.com बाट आफ्नो फोटोहरु इन्टरनेटमा बेच्न शुरु गरेका दाजुभाई राजव र रबि श्रेष्ठ, अहिले पनि हरेक महिना सयौ फोटोहरु इन्टरनेटमा बेच्ने गर्चन। यिनै दाजु भाई को बिचारमा इन्टरनेटमा फोटो बेच्न जान्नै पर्ने केहि आधारभूत कुरा हरु